काठमाडौं- नेपाल चिकित्सक संघले शुक्रबारबाट देशभरका सरकारी,निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने निर्णय गरेको छ ।सरकारसँग वार्ता संवादको माध्यमबाट वर्तमान समस्याको समाधान गरी योभन्दा कडा कदम चाल्ने परिस्थिती सिर्जना नगर्न आग्रह गरेको छ ।आज प्रस विज्ञप्ती जारी गर्दै संघले.....
अनुहार बिग्रीयो? चिन्ता छाड्नुहोस् र अनुहारको दाग हटाउने उपाय गर्नुहोस्
खास गरी टिन एजका युवा युवतीमा अनुहारमा अनावश्यक गन्डीफोर आउने, काला दागहरु बस्ने समस्याले सताउने गरेको छ भने उमेर बढ्दै जाँदा छाला चाउरिने र अनुहारभरी दाग बस्ने समस्या प्रौढहरुमा देखिने गरेको छ । तपाईं पनि अनुहर कुरुप भयो भनेर चिन्तामा हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता छाड्नुहोस् र अनुहारको दाग हटाउने उपाय गर्नुहोस्.....
गर्भावस्थाका मुख्य लक्षण तथा ध्यान दिनैपर्ने कुराहरु
गर्भावस्थाका मुख्य लक्षणहरुसमयमा महिनावारी नहुने थकाइ लाग्ने वा जिउ गल्नेशरीरमा ज्वरो आएजस्तो लाग्नेकुनै खानेकुरा धेरै खान मन लाग्ने वा खानै मन नलाग्नेबारम्बार पिसाव लाग्नेस्तन गानिएर आउने, ठूलो हुनेढाड (तल्लो भाग ) दुख्नेगर्भ रहेपछि हल्का रक्तश्राव हुनेटाउको दुख्नेदिक्क लाग्ने वा तनाव हुनेबिहान.....
काठमाडौं- आज राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ। बिधेयक पारित- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले बिरोध गरेतापनि अवरोध हटायर बिधेयक पास भएको हो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयक लियर मर्यादापालकको 'स्कर्टिङ' मा रोष्ट्रम पुगेका थिए । कांग्रेसले विरोधका कारण प्रतिपक्षले.....
पाठेघरमा मासु किन पलाउँछ ?पाठेघरमा कुनै पनि समस्या नआओस् भनेर के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
धेरै महिलामा पाठेघरमा मासु पलाउने समस्या देखिने गरेको छ । पाठेघरमा मासु पलाउने समस्या कस्तो हो ? पाठेघरमा मासु किन पलाउँछ ? पाठेघरमा मासु पलाउने बित्तिकै शल्यक्रिया आवश्यक छ वा छैन ? के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? यिनै विषयमा विना न्यौपानेले स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर नुतन शर्मासँग कुराकानी गर्नुभएको छ । पाठेघरमा.....
काठमाण्डाै – चिसो बढेसँगै मौसमी रुघाखोकी (सिजनल इन्फ्लुएञ्जा) का बिरामीको सङ्ख्या बढेको छ । चिकित्सकका अनुसार मौसमी रुघाखोकी नयाँ रोग नभई श्वासप्रश्वास प्रणालीमा भाइरसद्वारा लाग्ने एक किसिमको सङ्क्रमण हो । जाडो मौसम तथा मौसम परिवर्तन हुने बेलामा रुघाखोकीसहित ज्वरोको सङ्क्रमण बढ्छ । विभिन्न अस्पताल.....
मृगौला स्वस्थ राख्न खानपिनमा ध्यान दिनुपर्छ, मृगौला जोगाउन के खाने, हेर्नुहोस ?
हाम्रो शरीरको निक्कै संवेदनशील अंग हो, मृगौला । मृगौला खरावी भयो भने ज्यान नै जाने खतरा पनि हुन्छ । कैयौं मानिसले किड्नी फेल अर्थात मृगौलाले काम गर्न छोडेर ज्यान गुमाउँछन् । यहाँ मृगौला स्वस्थ राख्न खानै पर्ने ७ खानाको विषयमा चर्चा गरिएको छ । मृगौला जोगाउन के खाने ? १.रातो खुर्सानी रातो खुर्सानीमा पोटासियम,.....
स्वास्थ्यसंग सम्बन्धीत विभिन्न रोगहरु विना उपचार निदान गर्न विभिन्न उपायहरु पनि अपनाउन सकिन्छ । विभिन्न उपायहरुमध्ये योगा पनि एक हो । योगाले तपाईको शरीरको कयौँ किसिमका समस्याहरुबाट छुट्कारा दिलाउँछ । यदी तपाई मोटोपन अथावा पेट संम्बन्धी समस्या छ भने योगमुद्रासन तपाइको लागि लाभकारी हुनसक्छ । योगा गर्नाले.....
बर्षा लागेपछि धेरै खालका स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न थाल्छन् । त्यसमध्यको एउटा समस्या हातखुट्टा हिलोले खानु पनि हो । सामान्य भाषामा ‘हिलोेले खानु’ भनेको औँलाका कापहरूमा एक किसिमको सेतो जम्नु हो । यो विशेषगरी खुट्टामा हुन्छ । विशेषगरी वर्षायाममा खाली खुट्टा हिँड्नाले यस्ता समस्या देखापर्छन् । हिलोले.....
तपाई साकाहारी हुनुहुन्छ, साकाहारी भोजनका फाईदाहरु जान्नुहोस
प्राकृतिक हिसाबले भन्नुपर्दा मानिस मांसाहारी हो इन। मानिसको शारीरिक संरचनाअनुसार साकाहारी भो जन मानवका लागि स्वभाविक भो जन हो । मान्छे , बाँदर, घो डा, गाई यी सबै का दाँत एक समान सपाट हुन्छन्। जबकि मांसाहारी जनावरका दाँत लामा, तिखा र धे रै हुन्छन्। जसको सहायताले काँचो मासु लुछे र च्याति–च्याति.....